China Spherical Roller Bearings 22200 စီးရီးစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ရီ Xinyan
Spherical roller bearing သည်အတွင်းပိုင်း ring reway နှစ်ခု၊ အပြင်ဘက် ring reway sherical နှင့် sherical roller bearing type.The အပြင်ဘက် ring raceway စင်တာသည် bearing center နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၎င်းသည် self-align ဖြစ်စေသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ၁.၂.၅ ထက်မပိုသောအလယ်ဗဟိုရှိဆန့်ကျင်ဘက် ၀ င်ရိုးနှင့် ၀ င်ရိုး၊ အပြင်ဘက်နှင့်လက်စွပ်တို့ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်လေးလံသောလုပ်ငန်းနှင့်ထိတ်လန့်ဝန်များအတွက် radial load နှင့် axial load ကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
Spherical roller bearing ကိုအဓိကအားဖြင့်စက္ကူလုပ်စက်များ၊ လျှော့ချရေးဂီယာ၊ လှိမ့်ရိုး၊ လှိမ့်သောစက်ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်စက်၊ တုန်ခါနေသည့်မျက်နှာပြင်၊ ပုံနှိပ်စက်၊ သစ်သားစက်ပစ္စည်းများ၊ ဗဟိုပြု။
၁။ စက်မှုထုပ်ပိုး + အရံသားများ
2. သစ်သားသေတ္တာ + pallets
1. ဝက်ဝံများနှင့်သူတို့၏လုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ
မျက်လုံးသေးငယ်သည့်ဖုန်မှုန့်ကိုမမြင်နိုင်လျှင်ပင်စက်အတွင်းရှိစက်ထဲသို့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းအောင်နေစေရန်ဖုန်မှုန့်သည်အမှုန်များမ ၀ င်ရောက်စေပါ။
ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အရာ ၀ တ္ထုများကိုပေးပါကအမာရွတ်များနှင့်အနာများကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်လာသည်။ လေးနက်သောဖြစ်ရပ်များတွင်အက်ကွဲခြင်းနှင့်ကျိုးပဲ့ခြင်းများဖြစ်လိမ့်မည်။
3. မှန်ကန်တဲ့ tools တွေကိုအသုံးပြုပါ
စက်လည်ပတ်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်းများသည်သံချေးစေသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်လာပြီးသန့်ရှင်းသောလက်ဖြင့်လည်ပတ်ရန်ဂရုပြုပါ။ လက်အိတ်ဝတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ အလင်းဆုံကြိတ်စက်ဝက်ဝံ 22300 စီးရီး
နောက်တစ်ခု: နက်ရှိုင်းသော groove Ball Bearings 6000 စီးရီး
နှစ်ချက် Row လုံးလုံး roller ဝက်ဝံ
အလုံပိတ်စက် roller ဝက်ဝံ
လုံးပတ် Roller တွန်းကန်အားဝက်ဝံ
Sherit ကိုစက်လုံး Rolling ဝက်ဝံ